डा. एलियाले रविलाई भनिन्- ‘अरुलाई कानुन पढाउनु भन्दा पहिले आफु जेल जाऊ र म अपराधी हु भन्दै माफी माग’ — Imandarmedia.com
डा. एलियाले रविलाई भनिन्- ‘अरुलाई कानुन पढाउनु भन्दा पहिले आफु जेल जाऊ र म अपराधी हु भन्दै माफी माग’
एकाबिहानै एकजना नाम चलेकै टुइटे डा. एलिया अर्यालले आफ्नो ट्वीटरमा येस्तो लेख्दै चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने माथि यस्तो गम्भिर आरोप लगाएकी छिन । उनको आरोप तल जस्ताको तस्तै हेर्नुहोस र एलियाको ट्विटमा रवि स्वयंले पनि रिप्लाई गरेका छन् ।
“रबि लामिछाने कानुनको पालना गराउदै हिड्छन । तर उनले पनि कानुन मान्नुपर्यो उनी चै दुई-दुई ओटी श्रीमती बिहे गर्दा बहु बिहेमा जेल जानू नपर्ने के नेपाली मुलका अमेरिकन भएकैले छुट पाएको हो ? यदि इमानदार भए जेल जाउ कानुन पालना गर कि पहिला म फटाहा थिए अहिले सुध्रिन चाहन्छु भनेर जनतासग माफी माग।”
अर्काे पनि ट्विटमा यस्तै लेखेकि छिन- ‘बहु बिहेमा जेल जानु पर्ने लामिछानेहरु दुई-दुइटी श्रीमती पाल्न नसकेर मिडियाको सहारा लिएर सति सावित्री बनेका हुन । अमेरिकामा मस्ति गरेको ५,६ करोड ऋण लगाई सकेपछि प्रेम बानियाको खोक्रो राष्ट्रवाद पशुपतिमा सेलाएर टेक्सासका चर्च पस्छन । यहा भदौमा अाखा फुटेका गोरु चैतमा नि हरियै देख्छन।’
यसैमा रबि लामिछानेले डाक्टर अालियाकै प्रतिउत्तरमा यस्तो लेखेका छन्-“हर पागलहरुको ठेक्का कहॉ लिन सकिन्छ । पागलखानाहरु र उपचार गर्ने डाक्टरहरुलाई पनि त केही काम छोड्नै पर्यो नी।”
हेर्नुहोस् एलियाको ट्वीट जस्ताको त्यस्तै